अर्थमन्त्री खतिवडाको खुल्यो भाग्य - नेपालबहस
अर्थमन्त्री खतिवडाको खुल्यो भाग्य
| १२:२९:१६ मा प्रकाशित
२१ बैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको हिजो साँझको चर्चित सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णयले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ठूलो त्राण मिलेको छ ।
करिब दुई महिनाअघि उनै बामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिश गर्न सचिवालयले दिएको निर्देशन हिजोको बैठकले खारेज गरिदिएको छ । अब बामदेवलाई नलगी डा. खतिवडालाई सिफारिश गर्न ओलीका लागि सहज भएको छ । राष्ट्रियसभाको पहिलो कार्यकाल दुई वर्षमै समाप्त भएका डा. खतिवडालाई निरन्तरता दिन ओली चाहन्थे । तर बामदेवको नाम ल्याएर नेताहरुले अफ्ठेरो पार्न खोजेको भन्दै सचिवालयको निर्देशन अटेर गरेर बसेका थिए ।
सचिवालयको उक्त निर्णयले अर्थमन्त्री खतिवडाको पद केवल छ महिनाका लागि मात्र थपिएको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संघीय सरकारको मन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा मध्ये कुनै एकको सदस्य हुनैपर्ने बाध्यत्मक अवस्था छ । त्यसैले डा. खतिवडा ओली सरकारको तेस्रो बजेट ल्याएर बिदा हुने अनुमान गरिएको थियो ।
तर हिजोको सचिवालय बैठकले बामदेवको राष्ट्रियसभा च्याप्टर क्लोज गरिदिएपछि डा. खतिवडाले ओलीको सम्पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने अवस्था निर्माण भएको छ । अब खतिवडाले ६ बर्ष कै लामो कार्यकाल सांसद पद खान पाउने भएका छन् । संभवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले डा. खतिवडालाई रिक्त राष्ट्रियसभामा मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरिने छ– बालुवाटार निकट स्रोतको दावी छ ।
डा. खतिवडालाई पार्टीका अन्य नेताहरुले त्यति नरुचाएपनि ओली भने उनकै भर परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली खेमाकै नेता ईश्वर पोखरेलले अर्थमन्त्री बन्ने चाहना गरेपनि पाएनन् । त्यस्तै नेता माधवकुमार नेपालले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउन जोडबल गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडालाई नै उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका हुन् ।
एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु, बामदेव गौतम पनि सहभागी ४ हप्ता पहिले
ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन बामदेव बालुवाटारमा ४ हप्ता पहिले
बालुवाटारमा ओली र वामदेवको भेटवार्ता २ महिना पहिले
अदालतले संसद् विघटन सदर गरे चुनाव : अध्यक्ष तिमिल्सिना ३ महिना पहिले
टिपर दुर्घटनामा परी दाजुभाइको मृत्यु १० घण्टा पहिले
पुनःनिर्मित भवनबाट प्रहरीको नियमित सेवा शुरु ४ दिन पहिले
दूरसञ्चारले आइटी ल्याबका कर्मचारीलाई तालीम दिने २ हप्ता पहिले
म्यानमार घटनाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो चासो १ हप्ता पहिले
संस्कृत र हिन्दीका ५० पुस्तक नेपालीमा अनुवाद ३ हप्ता पहिले
व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनबाट ४ हप्ता पहिले
राष्ट्रपति भण्डारी ढाकामा, आजै द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने ३ हप्ता पहिले
मझुवागका ४४ प्रतिशत घरधुरी विद्युत् सेवा बाहिर २ वर्ष पहिले
टेकु अस्पतालबाट कोरोना जितेर चार जना डिस्चार्ज ११ महिना पहिले
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्था कारबाहीमा ४ महिना पहिले
त्रिभुवन विश्वविद्यालय दुई साताका लागि बन्द ८ महिना पहिले